March 2021 - San Thitsa
Zawgyi ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိတဲ့စိတ်ထားတွေငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်…. ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိတဲ့စိတ်ထားတွေ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ် မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်ပါစေ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးလည်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေ မေန့က ၂၉.၃.၂၁ ဆန်ကြက်သွန်နီအာလူးငရုတ်သီးပုငါးသေတ္တာပဲပင်ပေါက်ပဲပြားငါးတန်ဟင်းသီးဟင်ရွက်အစုံ ဒီနေ့ ၃၀.၃.၂၁ (Day10) ဆန်ဆီကြက်သွန်နီအာလူးငါးသေတ္တာငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံ “လိုလျှင်ယူ Unicode ကမ်ဘာမှာဘယျနိုငျငံမှ မရှိတဲ့စိတျထားတှငေါတို့မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတယျ…. ကမ်ဘာမှာဘယျနိုငျငံမှ
ခြိုးခြံ ချွေတာ စားရမယ့် ကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ အာဟာရ ပြည့်အောင်
Zawgyi ခြိုးခြံ ချွေတာ စားရမယ့် ကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ အာဟာရ ပြည့်အောင် ကျွန်တော်တို့ အခု ရက်ပိုင်းက ခြိုးခြံ ချွေတာ စားရမယ့် ကာလ ဖြစ်တဲ့ အတွက်တန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ အာဟာရ ပြည့်အောင်
သားငယ်သတိရလာတော့မေးတယ် မေမေ ဖေဖေ သားညာဖက်လက်ကလေး ဘယ်ရောက်သွားလဲ?
Zawgyi သားငယ်သတိရလာတော့မေးတယ် မေမေ ဖေဖေ သားညာဖက်လက်ကလေး ဘယ်ရောက်သွားလဲ? သားလက်ခလေးရောတဲ့ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေဖွင့်လို့ တတိယနှစ်တက်တော့ သားမှာညာဖက်လက်မရှိတော့ဘယ်လိုပုံတွေဆွဲမလဲတဲ့ စာကြည့်တော့စာဖတ်တော့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးတလုံးထဲနှင့်ဘယ်လိုကြည့်လို့အားမ တော့ဘူးတဲ့ ရှေ့သွားတွေမရှိတော့ ဘယ်လို စာတွေ အသံတွေ ထွက်နေမလဲ? တဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး
Zawgyi သူများတွေတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဂါထာကို တော်တော့်ကိုယုံကြည်နေပြီဂါထာကရွတ်ရလဲလွယ်တယ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကလဲ တော်တော်စွမ်းတယ်လမ်းပေါ်ထွက်တိုင်း ဒီဂါထာရွတ်တယ် တခါက လှည်းတန်းသွားတယ် ပြီးတော့ အဲ့ကနေအင်းယားဘက်လဲရောက်ရော လှည်းတန်းမှာပစ်နေတယ် အင်းယားကနေ ဘူတာရုံလမ်းကိုဖြတ်ပြီးပြန်တယ်အိမ်ရောက်တော့မှ ဘူတာရုံလမ်းမှာပစ်နေကြတယ်တဲ့ အခြားလွှတ်မြောက်လာတာတွေလဲရှိသေးတယ်အခုထိတော့ ပစ်နေလို့ဆိုပြီး တခါမှမပြေးဖူးသေးဘူး အခြားဂါထာတွေရွတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်တောင်ဒါလေးကို
Zawgyi ယခုနှစ်မှာ သင်္ကြန်စာ အလိုအရကြာသတေး တာစား တာညံ့တာ မဟုတ် အကောင်း ပါ ဒီနှစ် အင်္ဂါဂြိုလ် နဲ့ သောကြာဂြိုလ် တွေ ညံ့နေတာပါအင်္ဂါဂြိုလ် ညံ့တော့ – တိုင်းပြည်မှာ စစ်တွေ –
Zawgyi အတိုက်အခိုက်ကင်းစေ အညံ့ရှင်းစေရန် အတိုက်ကင်းစေ အညံ့ရှင်းစေ ၁။မိမိနေ့စဉ် ရေချိုးသည့် ရေ၊ရေပုံး၊ရေကန်များထဲတွင် ပရုပ်ပြား ၂ပြား၊၃ပြားခန့် ထည့်ထားရပါမည်။ ထိုရေ နှင့်ရေချိုးသန့်စင်နေသရွေ့ မိမိထံကျရောက်နေသောအံ့မိခြင်းဒုက္ခမှပျောက်ကင်းခြင်း၊အတိုက်အခိုက် အညံ့အပ အနှောင့်အယှက်အလုံးစုံတို့မှ ကင်းလွှတ်ငြိမ်းစေပါတယ်။ကျန်းမာရေးလည်းအလွန် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၂။အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်း တွေထဲမှာ
ဒီချိန်မှာ မိသားစုတိုင်း သံပုရာသီး( ၉ ) လုံးကိုယခုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြီး ဆောင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ထားပေးကြပါ
Zawgyi ဒီချိန်မှာ မိသားစုတိုင်း သံပုရာသီး( ၉ ) လုံးကိုယခုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြီး ဆောင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ထားပေးကြပါ(အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်) ဒီကြားထဲမိသားစုအားလုးံ သံပုရာသီးတလုးံစီဆောင်ထားကြနော် စီရင်မည့်သူ မွေးနေ့မရောက်ခင် တစ်ရက်ကြို ပြီး သံပုရာသီးကို ဈေးကနေ ၉ လုံးဝယ်လာပါ ပြီးရေသေချာဆေး မွေးနေ့မတိုင်ခင်
မန္တလေးက ၅နှစ်ကလေးလေး operation အောင်မြင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်လွတ်မြောက်
Zawgyi မန္တလေးက ၅နှစ်ကလေးလေး operation အောင်မြင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်လွတ်မြောက် သတင်းကောင်း!!! Mandalay က ခေါင်းကိုကျည်ထိတဲ့ ၅နှစ် ကလေး ရဲ့ဦးလေးနဲ့ contact ရပါတယ်။ ” ကျနော်တို့ ဆုတောင်းပြည့်ပါတယ် ခင်ဗျား!! ကလေး
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်၂၇ ရက်နေ့က အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ ပဲ
Zawgyi သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်၂၇ ရက်နေ့ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ တကယ်မထူးဘူး သေတာပဲများတာအားရော့တာလား ဇမရှိဘူးလား တွေ လုပ်မနေနဲ့ကို့ဂုဏ်ကိုဖော်နေမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူး ဂွတေ ဓားတွေနဲ့ လူ ၁၀၀ လောက်က သေနတ်နဲ့ ခွေး ၇ ကောင်လောက်ကို အနာတစ်ခုဖြစ်အောင်တောင် မလုပ်နိုင်ဘူး
သင်နေတဲ့ အိမ် (သို့) အခန်းမှာ ဒီအချက် (၄)ချက် ရှိနေရင် အမြန်ဆုံးပြင်လိုက်ပါ
Zawgyi သင်နေတဲ့ အိမ် (သို့) အခန်းမှာ ဒီအချက် (၄)ချက် ရှိနေရင် အမြန်ဆုံးပြင်လိုက်ပါ အ ရာရာတိုင်း၊ ပစ္စည်းတိုင်းမှာ စွမ်းအင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ သင့်အိမ်ကို လာဘ်တိတ်စေသလို၊ သင့်ကိုလည်း ဘုန်းကံနိမ့်စေတဲ့